38 qof oo COVID-19 ugu geeriyooday Degmada Caabudwaaq | Dhacdo
Home Wararka Maanta 38 qof oo COVID-19 ugu geeriyooday Degmada Caabudwaaq
Wararka ka imaanaya Degmada Caabudwaaq ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in 38 qof ay calaamadaha COVID-19 ugu geeriyoodeen degmadaasi, saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay.
Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ee Degmada Caabudwaaq, Cabdinaasir Cali Jaamac ayaa sheegay in dadkaasi qaarkood ay xanuunka ugu geeriyoodeen xarunta bukaanada lagu daryeelo.
Isku-duwaha ayaa sheegay in baaritaan lagu sameeyay qayb ka mid ah dadkaasi lagu ogaaday in xanuunka u geeriyoodeen.
“Magaalada Caabudwaaq xanuunka COVID-19 waa soo gaaray, waana hayaa, saddexdii isbuuc ee u dambeysay waxaa ku dhimatay 38 qof, dadkaasi waxaanu ka xaqiijinay isbitaaladii ay taggeen, qaarna meeshii xaruntii ahayd bay ku dhinteen, xanuunkiina bayna u dhinteen, baaritaan baana lagu sameeyay qayb ka mid ah dadkaasi. Xanuunkii waa jiraa, degmada waa hayaa, aad iyo aad buuna weliba u hayaa, uguna jiraa.” Ayuu yiri Isku-duwaha Wasaaradda Caafimaadka oo la hadlay VOA.
Xildhibaan Mahad Kilic Warsame oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug ayaa xaaladda Degmada Caabudwaaq ku tilmaamay mid qaylo-dhaan mareysa xilligan.
Xildhibaan Mahad Kilic Warsame ayaa sheegay in labadii toddobaad ee ugu dambeysay ay dadka aad ugu la’anayeen degmadaasi, maanta, shalay iyo doraad buu yiri ha ugu darnaatee.
“Hadda waxay taagan tahay Caabudwaaq, qofkii oo nool in laga samro, sababo uu keenay cudurkaasi iyo meeshii loogu talagalay oo marka hore aan diyaarsanayn, laakiin illaa maanta oo si aad ah Maamulka Degmada iyo Wasaaradda Caafimaadka ugu ammaanayo inay uga shaqeeyeen.” Ayuu yiri Xildhibaan Kilic.
Xildhibaanka ayaa yiri “Caabudwaaq xaaladeeda meeshaas ayay mareysaa, waa meel halis ah. Inta badan dadku uma diyaargaroobin oo sideedii hore oo caadiga ahayd ayaad arkeysaa in Masaajidada, hoolalka aroosyada iyo maqaaxiyadaha leeskugu imaanaayo oo hoteelada la fadhiyo, aad buuna cudurkaasi u saameeyay magaalada.”
Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid ah Calimada Degmada Caabidwaaq ayaa bulshada ugu baaqay in la xiro goobaha cibaadada iyo waxbarashada.
“Waxaan rabaa dadka reer Caabudwaaq inaan iraahdo Madaariska, Masaajidada, Iskuulada wax laga barto iyo Jaamacadaha aan hakino muddo isbuuc ah, si aan u qiimeyno xaalku suu noqdo, maadaama horteena lagu aasayo dadkeynii waxgalka ahaa, ganacsatadii ugu horeeyaan, Culima’udiin ku jiraan, dad fara-badana ku jiraan, horteenana lagu aasayo.” Ayuu yiri Macalin Sugaal Cali Guuleed.
Qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ayaa laga dareemay saamaynta ka dhalatay soo laba kacleynta xanuunka COVID-19.
Previous articleWasiir Dubbe oo sheegay in shirka lagu qaban doono Xerada Afisyooni
Next articleGaari nooca xamuulka oo shil ku galay Muqdisho (SAWIRRO)